Deggersaa fi Gargaarsa | Ramsey County
Deggersaa fi Gargaarsa - nyaata, kiraa, kunuunsa daa'imaa
Tajaajilawwan deggersa maallaqaa karaa sagantaa garaa garaa jiraattota gargaarsa barbaadaniif deeggersa dhiheessudhaan maatiwwanii fi gaheessota mana hin godhatiniif gargaarsa godha.
Sagantaalee kanneen hedduu isaanii argachuuf applymn.dhs.mn.gov irratti galmaa’aa. Lakkoofsa 651-266-4444 irratti Tajaajila Deeggarsa Maallaqaa qunnamaa.
Sagantaan Deggersa Nyaataa Dabalataa (SNAP) namoota dhuunfa fi maatiwaan galii gadi aanaa qaban nyaata barbaadanii fi madaalawaa ta’e akka argataniif isaan gargaara.
Deggersa Qarshii Callaa
Jirattonni galii gadi aanaa qaban karaa sagantaalee garaa garaa ulaagaa guutuu malu.
Sagantaan Deggersa Hatattamaa namoota dhuunfa fi maatiwwan galii argachuudhaaf ulaagaa guutan fi kan qusannaan jalaa miidhame, kuufama kiraa, liqii yookin itti fayyadamaa kan yeroo darbee irra jiru kan gargaarudha.
Deggersa Kunuunsa Daa’immanii
Sagantaan Deggersa Kunuunsa Daa’immanii maatiwwan galii gadi aanaa argatan kaffaltii kunuunsa daa’imaa akka kaffalatan isaan gargaara. Kunis maatiwwan hojii yookin barnoota akka barbaaddataniif ni gargaara.
Tasgabbii Mana Jireenyaa
Tasgabbiin Mana Jireenyaa namoota mana jireenyaa hin qabne, kanneen mana dhabiinsaaf saaxilaman yookin mana isaanii keessa turuudhaaf deggersa hatattamaa barbaadniif madda galii/ waan itti fayyadaman dhiyeessaf.
Waa’ee tajaajilawwan tasgabbii mana jireenyaa bulchiinsichaa fi qaamolee addaa addaa irraa argamanii caalmatti baraa
Daa'immanii fi maatilee
Kunuunsa Guddisa Daa’imaa fi Guddifachaa
Ijoollee deeggarsa barbaadaniif yeroo muraasaf yookin yeroo dheeradhaaf mana jireenyaa dhiyeessuf adeemsa isaa eegaluudhaaf bilbilaa.
Tajaajilawwan Qaama miidhamummaa fi Namoota Yeroo Dheeraa Hojjataniif/ Dulloomaniif kennamu
Tajaajilawwan qaama miidhamaadhaa yookin namoota yeroo dheeraa tajaajilaniif akkasumas namoonni kunneen mana isaanii akka turaii fi hawaasa isaanii keessatti bu’a qabeessa ta’anii akka jiraatan gargaaru argachuudhaaf ulagaa guutuu ilaalchisee murteessudhaaf bilbilaa. Tajaajilawwan kunneen kan of keessatti hammatu tajaajila manaa fi hawaasa irratti hundaa’ee kennamu, deeggarsa maallaqaa kunuunsaa filannoo qabu, deeggarsa maallaqaa deeggarsa bittaa/fayyadamtootaa, deeggarsa kunuunsa dhuunfaa, leenjiwwan walakkaadhaan gahuumsa namaaf kennanii fi kan biroo hedduudha.
Kunuunsa Daa’immaniif Waraqaa Ragaa Kennuu
Waa’ee mana keessatti kunuunsa daa’immanii ragaa kennuu odeeffannoo argachuudgaaf bilbilaa.
Miidhaa/qoccolloo ijoollee yookin gaheessota saaxilamoo ta’an irra gahu gabaasaa 24/7
Deggersi maallqaa fi hamilee maatii lamaan irraa ijooledhaaf taasifamu akka isaan kaka’uumsa horatan/dagaagan taasisa. Daa’imman baasiwwan bu’uuraatiif, kunuunsa ijoolle fi baasii meedikaalaa fi ilkaanitiif kan isaan barbaachisu deggersa maallaqaa argachuu isaanii mirkaneeffachuuf maatiin isaanii wal faana hin jiraatan yoo ta’e, maatii isaanii lamaanuu waliin ni hojjanna.
Wiirtuu Fayyaa Sammuu
Namoota fayyaa sammuutiin rakkataniif yookin wantoota sammuu addoochan fudhataniif tajaajilawwan kanneen akka beellama malee, kan yeroo gabaabaa fi rifaraalaatiif.
Wiirtuu Itti Waanta Summaa’aa Nama Keessaa Baasan
Namoonni mallattoolee araadaa akka to’ataniif yookan alkoolii yookin baala sammuu adoochu irraa bilisa akka ta’aniif gargaaraa.
Deggersa rakkoo fayyaa samuutiif godhamu 24/7
Deggersa bilisaa hojjachiistotaa kanneen akka woorkshooppiwwan, leenjiiwwan, beeksisa hojii marsaa intarneetaa (ramseycounty.us/JobConnect) karaa Bulchiinsa Raamsee fi michoota (partners) tajaajila keenyaa fi Garee Hojii Minesootaa ni jira.
Gorsitoonni karaa qacarrii, leenjii af-gaaffii fi akkaa itti hojiif galmaa’an irratti deeggarsa taasisuudhaan namoota hojii barbaadanii fi hojjachiistota wal qunnamsiisu.
Bakka tajaajilli itti argamu
Garee Hojii (CareerForce) St. Paul keessa jiru (Feerviwu & karaa Yuunivarsiitii)
Wiirtuu Mootummaa Bulchiinsa Raamsee Bahatti (Downtown Saint Paul)
Hojjattoonni Tajaajila Veteraanotaa Bulchiinsa Raamsee (VSOs) veteraanotaaf, ijoollee isaani fi baraaramtoota fayidaalee veteraanotni bulchiinsa, naannoo fi federaala irraa argachuuf iyyatan ilaalchisee qajeelfamaa fi deggersa dhiyeess.